220kV polima àmụmà arrester
220kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa na akara na ngwaọrụ ọdụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na nzụlite arrester dị onl ...
110kV polima àmụmà arrester ojii ụdị
110kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ebe ọdụ ike. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na nzụlite arrester dị onl ...
110kV polima àmụmà arrester
66kV polima àmụmà arrester ojii ụdị
66kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ike ọdụ ngwaọrụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na ntanetị arrester bụ naanị ...
Igwe ọkụ ọkụ 66kV polymer
35kV polima àmụmà arrester
35kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ike ọdụ ngwaọrụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na ntanetị arrester bụ naanị ...
10kV polima àmụmà arrester
10kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ike ọdụ ngwaọrụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, ugbu a site na nzụlite arrester dị na ...
6kV polima àmụmà arrester
6kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ike ọdụ ngwaọrụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na ntanetị arrester bụ naanị ...
3kV polima àmụmà arrester
3kV Zinc-Oxide Surge Arrester General Zinc Oxide Type Surge Arrester bụ ihe kachasị ọhụrụ gafere － voltaji na-echebe maka nkesa akara na ike ọdụ ngwaọrụ. Ejikọtara ya na zinc oxide na metal oxide ndị ọzọ dị ka diski isi na-eguzogide diski, njirimara volt-ampere na ikike nke ugbu a nke ihe mgbochi ahụ ka mma nke ọma ma e jiri ya tụnyere ụdị SiC. N'okpuru voltaji na-arụ ọrụ nke ọma, nke dị ugbu a site na nrịgo ọkụ bụ naanị ...
General "K" na "T" ụdị fuuz njikọ / ọcha na-ekewa n'ime "KB, KU, KS" sub-types fuuz njikọ / ọcha nke na-ezo aka izugbe ụdị, eluigwe na ala ụdị na ịghasa ụdị kwa IEC-282 ọkọlọtọ. Ha na-adabara iji dobe-wepụ fuuz cutout na 11-36kV. 1. Kacha ọhụrụ nlereanya na bọtịnụ: ọ na-mere nke “K” ụdị fuuz njikọ na 6-8 agbaze ọsọ na "T" ụdị na 10-13 agbaze ọsọ Ha na-n'ọtụtụ ebe maka dobe si fuuz cutout. 2. General nlereanya w ...
dropout fuuz YK4 usoro
General Fuse Cutout bụ ụdị ọkụ eletrik dị n'èzí nke nkesa na-ekesa ma ọ bụ usoro nkesa ma jiri ya iji kpuchido ndị na-agbanwe ọkụ ma ọ bụ ahịrị megide mmetụta nke obere elekere na-ebuli elu, na-ebufe ma na-agbanwe ugbu a. Mbelata nkwụsịtụ fuse cutout nwere nkwado insulator na ụgbọelu fusi, kọntaktị static nke edoziri n'akụkụ abụọ nke nkwado insulator na kọntaktị na-agagharị na arụnyere na nsọtụ abụọ nke ụgbọelu ahụ. Ime nke onye ikuku ụgbọ mmiri bụ extingui ...
dropout fuuz YK3 usoro